Kehi Ramro Garne Icchya Bishwas Bhaktako Pida | Hamro Patro
जीवन खै के खै के मात्र हैन खुशीयाली पनि छर्न सकिन्छ । भक्तको जीवनमा खुशी भर्न तपाईको सानो सहयोगले उनको ठुलो सपना पुरा हुन सक्नेछ ।
जीवन खै के खै के! नचाहेको जस्तो हुन्छ न सोचेको जस्तो । न खोजेको जस्तो नै हुन्छ । आफुले खोजेको र रोझेको जस्तो नहुँदा जति पिडा मानिसलाई कहिले हुन्छ र ? सवल हुँदा हुँदै पनि मानिसले चाहेको गर्न सक्दैन भने अशक्त हुँदा के होला ? सायद हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ ।
उनले गाएको यही गीतले भने झैँ भक्त विश्वासले आफ्नो जीवन कहानी हामीलाई सुनाए । सायद आफ्नो जीवन कहानी भनि रहँदा रुन नसकेका उनका आँखा त्यसै थामिएका पक्कै छैनन् । नेपाली संगीतको क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने अठोट बोकेका भक्तको जीवन कहानी उनले गाएको गीत जस्तै छ एक दिनको घाम अनी सयौँ दिनको पानि ।
नामः भक्त कुमार विश्वकर्मा (Bhakta Kumar Bishwokarma )
विक्रम सम्बत २०५३ साल पुष ६ गते झापा सुरुङ्गाको एक सुकुम्बासी बस्तीमा जन्मिएका उनी जन्म देखी नै शारिरिक रुपमा अशक्त छन् । उनका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । जन्मदा खेरी नै भक्तका दुवै खुट्टा काम नलाग्ने थिए । ठुलो भएर के नै गर्ला र भन्ने सोच आयो होला उनकी आमालाई अनि फ्याँकिदिइन् । भक्त जन्मदै फ्याकिँएका थिए । तर, उनको भाग्य त्यति कमजोर कहाँ थियो र ? उनकी माइली फुपूले फालेको ठाउँबाट उठाएर ल्याइन र पालिन् ।
सङ्गीत सिक्ने क्रममा उनीहरुको समुहले दुवै मिर्गौला फेल भएका भानुभक्त अर्यालका लागि सडकमा गीत गाएर १ लाख १२ हजार संकलन गरेका थिए । सो देखेर आफ्नो लागि पनि केही गर्नु पर्छ भन्दै सरगम सङ्गीत विद्यालयको अगुवाईमा काकड्भिटा देखी धरानसम्म सडकमा गीत गाएर उनले सरगम सङ्गीत विद्यालय कै सौजन्यमा स्कुटर प्राप्त गरे । त्यसपछि भने उनलाई आवत जावतमा केही सहज भएको छ । झापामा बसेर आफ्नो आर्थिक अवस्थामा केही सुधार नभएपछी उनी चार जना साथिहरुसंगै काठमाडौँ आएका छन् । जुन सोच बोकेर उनी काठमाडौँ आएका थिए त्यो भन्दा फरक रहेछ काठमाण्डौ भक्त भन्छन् जसले काम लगाइदिन्छु भनेर काठमाडौँ बोलायो उसैले अहिले वास्ता गर्दैन, कसैलाई कसैको मतलव नहुँदो रहेछ आफ्नो लागि आफैँ गर्नु पर्ने ।' हुन पनि करिब ५ वर्ष भयो उनले घरको दैलो नदेखेको ।